Kacha mma N'ogbe Cyperus Oil mkpa rotundus mkpa mmanụ ụlọ ọrụ na-emepụta | HaiRui
wholesale Cyperus Oil dị mkpa rotundus mkpa mmanụ
rotundus mmanụ dị mkpa
Agba aja aja mmiri mmiri
Ìhè Yellow Brown
Ihe Nlele enyere
Ihe njirimara agwa
1.25kg Fiber Drum na n'ime uzo abuo plastic. Gi okpu nke 50kg / 180kg net. 3. Dị ka ndị ahịa chọrọ.
Ọnụ ọgụgụ (Kilogram) 1 - 100 100. 100
Est. Oge (ụbọchị) 8 Ndi kpakorita
1.25kg Fiber Drum na n'ime abụọ plastic akpa
2. GI drums nke 50kg / 180kg net.
48hours maka sample / 7days megide nkwụnye ego maka mmepụta ogbe
Item aha: Mmanụ Cyperus na mmanụ dị mkpa rotundus mmanụ dị mkpa na wepụ ahịhịa
Ngwa anya adiana:
-11 Celsius ~ + 35 Celsius
-Cyperus Rotundus Linn Mmanụ siri ike na amba na mmiri mmiri aja aja, isi osisi
-Cyperus Rotundus Linn Oil ọdịnaya: cyperus rotundus L.en, cyperus rotundus mmanya, na ndị ọzọ cyperone
-Cyperus Rotundus Linn Oil eji maka ncha, ihe na-esi ísì ụtọ, ihe ịchọ mma, ihe na-esi ísì ụtọ, nri na mmanya mmanya, gas ziri ezi na ahụike, na ịhụ nsọ, mmetụta mgbu.
-Cyperus Rotundus Linn Mmanụ a na-eji agwọ ọrịa afọ
-Cyperus Rotundus Linn Mmanụ .improves ọnọdụ na tufuo ịda mbà n'obi, na-achịkwa menses, na-akwalite mgbasa ọbara, transducts mkpụrụ ndụ ihe nketa na oke imeju.
Anyị isi ngwaahịa:
Mmanụ ginger, mmanụ klọọkụ, mmanụ gallic, mmanụ Anise, mmanụ Lemọn, mmanụ mkpụrụ flax, mmanụ almọnd ụtọ, mmanụ izizi ọka wit, mmanụ mgbede, mmanụ Borage, mmanụ Patchouli, mmanụ Lavender, mmanụ Eucalyptus, mmanụ Cinnamon, mmanụ Perilla, Reishi mmanụ spore, mmanụ chili, mmanụ myrrh, mmanụ tii, mmanụ sandalwood, mmanụ Oregano, Carvacrol, mmanụ a na-akpọ Spearmint, Ursolic Acid, Borneol, Aloe vera oilandGinseng oiland were gabazie.
Inclọ ahịa nchekwa
2 afọ mgbe a na-akwadoro
Ahaziri Brand na Logo: Dị
Usoro ohuru nke nwere otutu ihe
1.Customized ngwugwu, olu, logo
Iwu 2.OEM / ODM
3.We nwere ike ịnye gị ụdị nke anyị na ọnụahịa asọmpi.
Ozugbo ị debere anyị iwu, ihe anyị ga-agbaso usoro gị wee mee ka ị mara
Usoro kachasị ọhụrụ ruo mgbe ị natara ya. Anyị ga-akarị
obi dị m ụtọ inye gị azịza n'ime awa 24.
Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na ịmịpụta, nhazi na ire ere osisi ndị dị mkpa, nke rụzuru asambodo MSDS na COA. Mgbe niile anyị ka na-agbaso nkenke nke "lanarị nwere oke mma, tolite na ntụkwasị obi"
Anyị factory ekpuchi 26000 square mita, invests enweta ego nke 18 nde, na topping ule akụrụngwa na dị iche iche nnwale ule ụlọ ọrụ.
Ihe ọzọ bụ na anyị adịghịkwa akwa ụdị ngwaahịa ọ bụla na anụmanụ; anyị bụ 100% veg. & ụlọ ọrụ na-ahụ n'anya. Ya mere ịhọrọ anyị bụ ezi uche mkpebi gị.
1. Q: you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa? Ebee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị dị?
Azịza: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe maka skincare na mask OEM / ODM, anyị na-arụ na ntecha n'ichepụta kemgbe afọ 2006. Anyị factory emi odude ke Jiangxiprovince, mkpa mmanụ n'ichepụta center nke China.
Ajụjụ: Gịnị ka ụlọ ọrụ gị nwere ike imere ndị ahịa gị?
A: Anyị nwere ike ịme ihe nyocha, imepụta ihe eji arụ ọrụ maka ndị ahịa ma ọ bụ ihe achọrọ, mepụta mmepụta, nyocha ihe ịchọ mma, nhazi ahịa maka ndị ahịa anyị
3.Q: Kedụ ka anyị nwere ike isi malite azụmahịa na ụlọ ọrụ gị?
A: Naanị ịkpọtụrụ otu onye isi anyị, anyị ga-emere gị ihe niile site na mma ruo mbupu. Anyị nwere ike ịmepụta ihe ịchọ mma nke sitere na ndị ahịa na-achọsi ike, ihe nlele, ma ọ bụ usoro.
4, gịnị kpatara anyị ji ahọrọ ngwaahịa ụlọ ọrụ gị?
N'ihi na anyị companyisinexpensive na price mgbe magburu onwe ya na mma, nwere nnọọ ọkachamara na-ahụ maka ahịa otu, anyị nabatara na otuto site ahịa anyị, na anyị ga-anọgide na-enye ndị ji ezi obi na ọrụ, nke kacha mma mma na ndị kasị oké ọnụ ahịa, na-akwado gị maka ọdịnihu na ọganihu. Ekwenyesiri m ike na ụlọ ọrụ anyị bụ nhọrọ ị maara nke ọma!
4. Kedu ka esi amata ọkwa nke mmanụ dị mkpa dị iche iche?
B bụ Nri Nri, anyị nwere ike iji ha na nri ụtọ, ụtọ ụbọchị na wdg.
C bu ihe uda isi, anyị nwere ike iji ya maka ekpomeekpo & isi, ịma mma na nlekọta anụ ahụ.
Basil Mkpa mmanụ
Patchouli Mkpa mmanụ
Thyme Mkpa mmanụ
Private Label Top 6 Pure Aromatherapy mmanụ mmanụ Esse ...
Organic Virgin Morocco Cometic Ntinye ntutu mmanụ argan
Elu àgwà eke L-menthol na nnukwu price
Ọcha OEM Nlekọta Argan Mmanụ
OEM / ODM Sịntetik / Natural borneol flake / Bor ...
Factory Price Augmenting Agụụ Medicine Grad ...